» रचना रिमालका आफ्नै ४ चर्चित गीतहरु
रचना रिमालका आफ्नै ४ चर्चित गीतहरु
१९ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०५:१४
मकवानपुर, १९ बैशाख । नेपाल आईडल सिजन ३ का चर्चित प्रतियोगी रचना रिमाललाई धेरैले नेपाल आईडलको प्रतिस्पर्धामा आएपछि मात्र चिनेका हुन् । उनी यो प्रतियोगितामा आएसँगै नेपालभित्र र विदेशमा बसेका नेपालीहरुमाझ चर्चित बनेकी छिन् । तर धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ उनी नेपाल आईडलमा आउनुपूर्व नै ओरिजिनल गीत निकालिसकेकी गायिका हुन् । आईडलबाट बाहिरिएपछि पनि गीत सार्वजनिक गरिसकेकी रचनाका केही बाल गीतहरु पनि सार्वजनिक भईसकेको छ । हामी यस सामग्रीमा रचनाको छोटो परिचयसँगै उनका चर्चित ४ वटा ओरिजिनल गीतहरुका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ । उनले कुन–कुन गीत गाएकी छिन् ? ती गीतहरु कस्ता छन् ? कसरी सुन्ने र कस्तो छ गीतको भिडयो ? यस बारेमा छोटकरीमा चर्चा गर्नेछु । सुरुमा उनको बारेमा केही कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ ।
नेपाल आईडलको वाईल्डकार्डका लागि भिडेकी रचनाले गाला राउण्डको तेस्रो, चौथो र पाँचौँ हप्तामा गरी ३ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेकी थिईन् । उनी उत्कृष्ट ८ मा पुगेर बाहिरिएकी थिईन् । वाईल्ड कार्ड राउण्डभन्दा अघि कुनै पनि अवार्ड नजितेकी रचनाले वाईल्डकार्डमा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड पनि जित्न सफल भएकी थिईन् । झापाको भद्रपुर निवासी रचना रिमाललाई धेरै दर्शकहरुले सानी बहिनीका रुपमा लिने गरेका छन् । सुमधुर आवाज र ईनोसेन्ट नेचरका कारण उनी धेरै दर्शकहरुको रोजाईमा परेकी छिन् । उनै रचनाका केही ओरिजिनल गीतहरु यस्ता छन्–
१) फोटो फिरिममा–रचना रिमाल नेपाल आईडलबाट बाहिरिएपछि सार्वजनिक भएको गीत हो ‘फोटो फिरिममा’ । युवा अवस्थाको प्रेममा धोका पाएका एक प्रेमीको कथामा आधारित गीतमा रचना रिमालको सोलो भोकल सुन्न सकिन्छ । प्रेममा धोका पाएपछिका पिडाहरु समावेश गरिएको गीत ‘नयाँ नयाँ न्यूज नेपाल’बाट सार्वजनिक भएको हो । कलाकार शिशिर भण्डारीको शब्द संगीतमा तयार भएको गीतको म्युजिक भिडियोमा रचना र शिशिरलाई फिचरिङ गरिएको छ । कुशल सिंहको एरेञ्जमा तयार भएको गीत अकस्टिक स्टुडियो नक्सालमा रेकर्ड गरिएको हो । गीतमा हेमन्त कान्छा रसाईलीको साराङ्गी, नगेन्द्र राईको बाँसुरी र सञ्जीव बराईलीको गीतारको संयोजन सुन्न सकिन्छ । गीतको म्युजिक भिडियोको छायाँकन, निर्देशन र सम्पादन बिकल श्रेष्ठले गरेका हुन् । यो रचना रिमालको चर्चित गीतहरुमध्ये एक हो । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस गीतलाई १७ लाख ९० हजारभन्दा बढी पटक हेरिसकिएको छ भने गीतमा ७६ हजार लाईक र ८ हजार कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
२) रुमाल चिनो–रचना रिमालको आफ्नै आवाजमा सजिएको अर्को गीत हो ‘रुमाल चिनो’ । रोमान्टिक जेनरमा तयार भएको गीतमा एक प्रेमिकाको रोमान्चक भावना समावेश गरिएको छ । चर्चित संगीतकार बसन्त सापकोटोको अफिसियल च्यानलबाट सार्वजनिक भएको यो गीतमा बसन्त सापकोटाकै शब्द र संगीत सुन्न सकिन्छ । सञ्जीव बराईलीको एरेञ्जमा तयार भएको गीत प्रिज्म रेकर्डिङमा रेकर्ड भएको हो । अडियो भर्सन मात्र सार्वजनिक भएको यो गीतलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ६ लाख ४० हजारभन्दा धेरैपटक हेरिएको छ । गीतमा २८ हजार लाईक र करिब २ हजार कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
३) कोसँग बोलुँ मनको गाँठो फुकाएर–रचना रिमालको आफ्नै आवाजमा सजिएको अर्को चर्चित गीत हो ‘कोसँग बोलुँ मनको गाँठो फुकाएर’ । जीवनका यथार्थ अनुभूतिहरु समावेश गरिएको यस गीतमा मानिसहरुको पचाउन नसकिने सामाजिक व्यवहारहरु, केही मनका वेदनाहरु र मनका कौतुहलताहरुलाई व्यक्त गरिएको छ । लिरिकल भर्सन मात्र सार्वजनिक भएको यो गीत युवा मन नेपाल च्यानलबाट सार्वजनिक भएको हो । गीतका शब्दहरु कृष्ण उदासीले लेखेका हुन् भने संगीत गौरभ दर्पणले दिएका हुन् । पर्पल स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको गीतलाई नोर्बु शेर्पाले एरेञ्ज गरेका हुन् । यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा यस गीतको लिरिकल भिडियोलाई १ लाख ६४ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ भने ८ हजारभन्दा बढी लाईक गरिएका छन् । गीतमा करिब ५ सय वटा कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
४) लेकवेसी–रचना रिमालको आफ्नै आवाजमा सजिएको अर्को चर्चित गीत हो ‘लेकवेशी’ । एक किशोरीको मनमा उब्जिएका रोमाञ्चक अनुभूतिहरु समावेश गरिएको गीतको शब्द हिमान्सु रायमाझी गोधुलीले लेखेका हुन् । कृष्ण पाण्डेयको संगीतमा तयार भएको गीतलाई विशाल निरौलाले एरेञ्ज गरेका हुन् । आकर्षक अनलाईन टिभीबाट सार्वजनिक भएको यस गीतको म्युजिक भिडियोमा सुस्मा, कुशल लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् । गीतको म्युजिक भिडियोलाई सन्देश शर्माले छायाँकन गरेका हुन् । आशिष नेपालको निर्देशनमा तयार भएको भिडियोमा तुलशा पहाडीको कोरियोग्राफी हेर्न सकिन्छ । गीतको म्युजिक भिडियोलाई कृष्ण पाण्डेयले सम्पादन गरेका हुन् । अमृता भण्डारी र देवी पाण्डेयको निर्माणमा तयार भएको म्युजिक भिडियोलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ७० हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । गीतमा २ हजार ४ सय लाईक र १ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
यी ४ वटा चर्चित गीतहरुबाहेक पनि रचना रिमालका अन्य थुप्रै गीतहरु सार्वजनिक भएका छन् । उनका केही चर्चित गीतहरु सार्वजनिक हुने तयारीमा पनि रहेका छन् । उनका पुराना गीतहरु र अन्य गीतहरु युट्युबमा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेका कारण मैले यहाँ उत्कृष्ट ४ वटा गीतहरुको बारेमा मात्र चर्चा गरेको छु । यी गीतका लिंकहरु मैले भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा पनि राखेको छु । कस्तो छ सुनेर प्रतिकृया दिन नभुल्नुहोला । यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । भिडियो मन परेमा लाईक र शेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला ताकी यो सामग्री तपाईहरुजस्तै अन्य थुप्रैको माझमा पुगोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।